सम्पादकीय : आँशुलाई पैसामा ताैलेर राजनीति गर्ने पुरातन सोँचबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ — Bhaktapurpost.com
सम्पादकीय : आँशुलाई पैसामा ताैलेर राजनीति गर्ने पुरातन सोँचबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ
घिमिरे संजीप शुभचिन्तकभक्तपुर, ४ फागुन
सूर्यविनायक नगरपालिका-७ गुन्डुमा गत सोमवार दुखद दुर्घटना भयो । ६ बर्षिय बालक सिरिस तामाङलाई सम्साझै बाघले खाएपछि पूरै गाउँ शोकमा डुब्यो ।
गुन्डुमा यस अघि पनि यस्ता घटना नभएका होइनन् । बारम्बार घटना दोहोरिरहदा स्थानीयहरू आक्रान्त बनेका छन् तर सरोकारवाला निकायले पर्याप्त पहल गर्न सकेको छैन ।
प्राणि उद्यान स्थल समेत भनेर प्रचार गरिएको जंगललाई पर्खाल लगाएर राख्नु पर्नेमा सो हुन नसक्दा मानिसहरु बन्यजन्तुका शिकार भैरहेका छन् । एक्लैदुक्लै हिड्न ठूलै साहस गर्नुपर्ने अबस्था छ स्थानियलाइ । स्थानियहरु बिछिप्त र आक्रोशित बनेका छन् ।
जनताको आक्रोश देखि डराएर सूर्यविनायक नगरपालिकाले बाघलाई चितुवा बनाएको छ । पहिलो दिन बाघले मारेको भन्ने जनप्रतिनिधि अहिले चितुवाले बच्चा मारेको भन्न् थालेका छन् । जंगलमा बाघ, चितुवा , स्याल वा कुकुर नै भएपनि नियन्त्रण त आवश्यक होला नि । जनतालाई जंगली जनावरदेखि सुरक्षित गर्ने दायित्व कस्को हो ? कि अब आदिम काल झै मानिसहरु भाला बोकेर हिड्नुपर्ने हो ?
बिहीवार सूनपा मृतक बालकको परिवारलाई सान्त्वना दिन घरमै पुग्यो । जनप्रतिनिधिले सूनपाको तर्फबाट रु ५० हजारको चेक पिडित परिवारलाई हस्तान्तरण मात्र गरेनन् , उक्त फोटो सामाजिक संजालमै पोस्त्याउन समेत भ्याएका छन् । जनप्रतिनिधि पिडित परिवारकोमा पुग्नु राम्रो कुरा हो र आर्थिक सहयोग गर्नु पनि परिवारको आवश्यकता हो भने झनै राम्रो हो । तर , फोटो खिचाएर देखाउनका लागि गरिने कृयाकलाप क्षम्य हुदैन । फोटोमा पिडितको आँशु देखाएर जनप्रतिनिधिले के पाउन खोजेका हुन् ? मात्र वाहवाही होइन र ?
पिडित परिवारलाई पैसा होइन चाहिएको कुरा सुरक्षा हो । यो बिषयमा मौन बसेर नगरपालिका चुकेको छ । अरुको आँशुलाइ पैसामा ताैलेर राजनीति गर्ने पुरातन सोचबाट अबको स्थानीय निकाय र जनप्रनिधिहरु कम्तिमा मुक्त हुन सक्नुपर्दछ ।
घिमिरे संजीप शुभचिन्तक इभक्तपुर डट कमका सम्पादक हुन् ।